#Lamaane Isku Waayay Dagaalkii 2-aad Ee Adduunka Oo 75 Sano kadib is helay - Get Latest News From Horn of Africa
#Lamaane Isku Waayay Dagaalkii 2-aad Ee Adduunka Oo 75 Sano kadib is helay
Lamaane jaceyl baaxad weyn ka dhaxeeyay oo kasoo kala jeeda dalalka Mareykanka iyo Faransiiska ayaa dib u isku helay 75-sano kadib markii ay isku waayeen dagaalkii labaad ee dunida ka dhacay.
KT Robbins oo ahaa askari katirsan ciidanka Mareykanka ee loo geeyay dalka Faransiiska dagaalkii labaad ee dunida ka dhacay ayaa magaaladii uu joogay ka bartay gabar qurux badan oo lagu magacaabo Jeannine Pierson née Ganaye oo xiligaas 18-sano jir aheyd.
Lamaanahan ayaa mudo yar ay isla joogeen yeeshay xiriir jaceyl oo aad u sameeyay noloshooda, hasa ahaatee nasiib darada heshay ayaa aheyd in si deg deg ah isku waayeen lamaanahan markii uu jaceylku jirkoodu saaqay .
Askariga Mareykanka ee jeclaaday gabadha Faransiiska ayaa laga qaday magaaladii uu joogay iyadoona la geeyay magaalo kale oo dagaal ka socday, waxaana xiligaasi waxii ka dambeeyay uu xiriirkoodu go’ay lamaanahan lama filaanka isku jeclaaday.
KT Robbins ayaa heestay sawir ay laheyd gabadha uu jeclaa ee Faransiiska u dhalatay, waxa uuna ninkan 75-sano heestay sawirka gacalisadiisii hore oo niyadiisa ka go’i weysay xitaa hadii uu guursaday uuna yeeshay xaas iyo caruur.
Askarigan hada waayeelka noqday ayaa qisadiisa uga sheekeeyay Wariyaal Faransiis ah isagoo sidoo kale tusay sawirkii uu ka hayay jaceylkiisa, waxa ayna taasi horseeday in mar kale is helaan ayna kulmaan lamaanahan is waayay 75-sano kahor.
KT Robbins ayaa dhawaan mar uu Faransiiska u tagay xuska sanad guuradii 75-aad ee kasoo wareegtay dagaalkii labaad ee aduunka si lama filaan ku noqotay Wariyaashii sheekadiisa baahiyay ugu geeyeen gabadhii uu jeclaa balse ay is waayeen.
Lamaanahan ayaa ku kulmay xarun waayeelada lagu xanaaneeyo oo kutaala dalka Faransiiska halkaas ay ku jirto gabadhii qalanjada aheyd 75-sano kahor, waxaana lamaanahan markii ay is arkeen wajigooda laga dareemayay farxad aad u weyn.
Jeannine Pierson ayaa sheegtay in aysan marnaba hilmaamin jaceylkeeda ayna mudo badan sugeysay, waxa ayna xustay in mar walbo rajo ka qabtay in uu mar un usoo laaban doono ayna is arki doonaan.
“Mar walba waan ka fakari jiray, waxaan is lahaa wuu soo noqon doonaa, qof walba oo aan arko waan ka wareysan jiray, balse ma helin cid ii sheegta warkiisa,” ayey tiri Jeannine Pierson.
Haweeneydan weysay Jaceylkeeda ayaa guursatay sidoo kale dhashay shan caruur ah ,kadib markii ay ka quusatay in ay hesho jaceylkeeda ay is waayeen, waxaana sheekada lamaanahan sanado kadib is helay noqotay mid si weyn loo hadal hayo.